नेपाल लाईफ(NLIC)का लगानिकर्ता मालामाल बिशेष प्रस्ताब पारित – Palika Express
नेपाल लाईफ(NLIC)का लगानिकर्ता मालामाल बिशेष प्रस्ताब पारित
PalikaExpress २८ माघ २०७७, बुधबार 561 पटक हेरिएको
जीबन बिमाको बजारमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स प्रथम स्थानमा रहेको छ। नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स (NLIC)ले सेयर टुक्र्याउने, साना सना ईकाईमा परिणत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस कम्पनीको हिजो रजिस्टर्ड कार्यालय वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको २० औं वार्षिक साधारणसभाले सेयर टुक्र्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
अब यो प्रस्ताव धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको खण्डमा नेपाल लाईफको सेयर टुक्र्याउने योजना सफल हुनेछ ।त्यसपछि नेपाल लाइफको सेयरको अंकित मूल्य रु. १०० को ठाउँमा रु. ५० कायम गरिनेछ भने हाल सेयरधनीसँग रहेको सेयर संख्या दोब्बर हुनेछ । बजार मूल्य भने आधा हुनेछ ।
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभाले यसअघि संचालक समितिबाट भएको प्रस्ताव अनुसार आ.ब.२०७५ /७६ का लागि सेयरधनीलाई ३१% बोनस सेयर र २०% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । हाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको दोश्रो बजारमा ५ करोड ४९ लाख ६१ हजार ६०८ कित्ता सेयर सूचीकृत छ । कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा कम्पनीको हाल कायम प्रतिसेयर मूल्य रु.१०० रहेकोमा सो सेयर मूल्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रतिसेयर मूल्य रु. ५० कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।